WAAQAA SITTI IYYANNA!! – Beekan Guluma Erena
WAAQAA SITTI IYYANNA!!	Beekan Guluma Erena
Poems, Uncategorized April 11, 2016April 11, 2016WALALOO OROMOO	2 Comments
153SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Yaa Waaqa Oromoo gooftaa maqaa dhibbaa
Hinduutu hindulloomtu kankee ajaa’iba
Hiixattee qaqqabdaa kaabas ta’ee kibbaa
Mee waa’ee saakeenyaa sitti himannakaa
Ilmaan abbaa tokkoo kan qomoon tokkichaa
Waliigaluu dideetu halagaan gingilchaa
Saba gaanfa Afriikaa lakkoofsaan cirrachaa
Olaantummaa dhabeetu diinni irra didicha.
Yaa Waaqa guddichaa gooftaa ardiif samii
Araara nuuf godhi balleessinus tarii
Keessakeenya himna isa qabnu aarii
Garaadhaa waa hinqabu nuti akka warra kaanii
Yaa Waaqa tokkichaa gooftaa guddaa nana
Akka nama ulfaa yeroo hundaa maassanna
Hojiif gadi hinteenye halkan guyyaa kaannaa
Garuu bebbeelofnee harka namaa ilaalla
Hayyee! Hayyee! Hayyee!
Waaqa uumaa, Waaqa uumamaa,
Waaqa Saglan Booranaa, Waaqa Sagaltama Gabraa,
Jennee sikadhannawoo maaf nuun taane abbaa?
Tokko ta’uu dhiisee lammiin maaf waljibbaa?
Waaqa Torban Baarentummaa, Waaqa Ciicoo Gurraattii,
Marga harkatti baannee oofuu jennawooti
Maaf garboomne gooftaa Waaqa guddaa mootii
Obsa fixanneerraa nuuf dirmadhu ati
Waaqa Shanan Gadaa Oromoo
Waaqa Shanan Odaa Oromoo
Kaabaaf kibbaa, bahaaf dhihaa siwaamanna nuwoo
Hirkoo sigodhannee suma qabna dawoo
Dafii nuqaqqabi dadhabneerra ammawoo
Waaqa Caffee Tumaa Waaqa Bokkuu Gurraachaa
Waaqa hundaa dandeessu jiraataa tokkichaa
Kan Ereri Kormaa Waaqa Siidaa Tulluu Cuqqaalaa
Mee Oromoof ka’i uummata guddichaa
Quuqqaan nufixeera akka madaa cinaachaa
Waaqa Fincaan Tuulama Sadeenii Waaqa Jahan Galaan
Waaqa Malkaa Hawaas kan jiraattu baraan
Araraarakeen eegi warreen jooraa jiran
Galmaan isaan gahi warreen haqaaf qabsaa’an
Ayyaanni Oromoo Nagaan oolchii nu bulchi.
Garboonfataa keenya nurraa garagalchi
Ofiin of haabulchuu sabni keenya sichi
Nurraa haadhaabbatu dararaafi saamichi
Waan barri deemuun mee jalaa nu baasi.
Hamaa hammaataa nurraa qabi mogolee nu cimsi
Daafii galtee nu oolchi irraa gora nu oolchi
Harcaatuu habashootaa ammas nurraa garagalchi
Kan dabaan nutti deemu dhiibdoo keen nurraa dhiibi
Uumaa teenyaan nu bulchi, cabaa keenya dhidhiibi
Wallaalaa guddisi hayyuus nurra bulchi
Keenyumaan nubulchi orma nurraa qabi
Xinnaa nuuf guddisi guddaa mee nuuf bulchi
Wallaalaa beeksisi Beekaas nuuf muldhisi
Biyya biyya nagaa nuuf godhi mee nagaa nuuf buusi
Afaan keenya wal nu beeksisi hamtuu cabsii baasii
Jaalalakee nuuf kenni, Wal bira oolchii nu bulchi
Safuu keen nu bulchi Rooba Nagaa nuuf Roobi
Bubbee hamaa nurraa qabi, ka’us gadi qabi
Kan saggoo nu cabsee uleekeen adabi
Kormi cirrii haa ta’u, Rimaan haphee haa ta’u
Qabeenyi kan abbaa horee haa ta’u
Ilmi kan abbaa dhalchee haa ta’u
Qabeenyi Oromoo Oromoof haata’u
Gaaffii baay’ee qabna kan har’aaf iftaanii
Maaloo yeroo kamuu yaa Waaq nugargaarii
Galgallis ganamnis keenya jiruun aarii
Nutoo siin uumamneeti maal gooneetu tarii
Garraamummaa malee hinqabnuum jallina
Diina daara baasnee ofii qullaa deemnaa
Utuu hundaa qabnuu diinarraa kajeellaa
Yaa Waaq ati faradi nu harkakee ilaallaa
Egaa yaa Waaqayyo guddaadhaafi jabaa
Irkoo ofirraa dhabneeti mee nuuf ta’i abbaa
Keenyumaan nubulchi nubaasi walabaa
Nuuf haararraafamu injifannoon alaabaa
Gooftaa haqaaf firdii ati hibeektu hamii
Bara hunda jiraatta hinqabdu dorgommii
Cunqursaaf gidiraatti maaloo hinkenniin lammii
Kiyyoo kiyyeessanii xaxaaf shira hamaa
Akka hindarbineef nutti cufuum karaa
Ija akka hin godhanneef caccabsan daraaraa
Raatessuun cabsaniim warreen sammuu haaraa
Kan kaleessaa utuu jennuu kan har’aatu caalaa
Dubbii maaf dhorkamna maaliif dararamna?
Mul’annoo humnadhaa maaliif ittifamnaa?
Ibsaa keessa keenyaaf maaliif dararamna?
Xiinsammuun nu cabee maaliif gaadi’amnaa?
Bilisa taaneetu dhalanneem akka namaa
Dhibee baafachuufoo maaliif luugamamnaa?
Utuu miilla qabnuu maaf jilbaan daa’imnaa?
Dukkanaa dukkanatti wayyoo darbuuf deemnaa?
Guguungumaa deemna akka isa maraatee
Mimil’ataa deemna akka warra hatee
Diinnis nu dararse lammiidhaan da’atee
Yaa Waaqa guddichaa maal yoo nurraa kaaftee?
Roorroon nutti hammaatee mataarra nu darbe
Hayyuun boolla seenee xobbeen kan caccabe
Maanguddoonis iyyee qaalluun fala dhabe
Miidhaa halagaatiin lubbuu hedduu darbe
Kun maaf akkas ta’a? yoo jennee gaafannee
Ilaalcha diinaati jedhamnee shakkamne
Akka garaa hintaane jiraa ukkaamanee
Maaloo Yaa Waaqayyo fala nuu kennimee
Guddina dheebonnee yommuutti wawwaannu
Walqixxummaa dhabnee yerottii dharraanu
Wanta gochaa dhabnee asiif achi ilaallu
Dhokosaaf fala dhabnee asiif achi ilaallu
Imimmaan nugogee dhiiga xuruurfannu
YaaWaaq! Maalumaaf al tokko ijjikee nu laalu?
Gamanaas gamasiis hunduu iyyaa jira
Kumaaf kumaatamaam kan kaate maatiirraa
Kaan dhaabiitti du’e ka’e maasiisaarraa
Baay’een murteeffatee jiraachuus jibbeera
Guyyaan halkan ta’ee ifaan dukkanaa’ee
Qarreen hiree dhabdee qeerroonis raata’ee
Kuusaan dilbii onee nu harkaa tamsa’ee
Waan nuti harkaa qabnu qaata badduu ba’ee
Egaa Yaa Waaqayyoo kam dubbannee fixnaa
Waan itti miidhamne kam himnee kam dhiifnaa
Maaloo nuu danboobi nuti suma abdannaa
Harka nurra qabi ‘DHUGAA’f wareegamnaa!
Oromoon martinuu WAAQAA sitti iyyannaa!!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa153SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← QABSOO MIRGAAFI DHALOOTA QUBEE
GUFUUWWAN QABSOO →
2 thoughts on “WAAQAA SITTI IYYANNA!!”	robera ab macApril 11, 2016 at 3:17 pmPermalink	Abbaa hiyyessaa Abbaa hundaa!
Abbaa ruudaa, abbaa muudaa!
qe’ee hormaa liqii hin deemtuu!qarshii kadhaan boombii bittee saba hin miitu!
Gaffii ummataa uuruu qawween hin deebiftuu!
Badii malees nama hin hiituu,
Biyyaa baastees hin ariituu!
Inveestidhaaf qonnaan bulaas hin buqqaaftuu,
Hongeef beelaaf hin saaxiltuu!
Mootii hundaa xinnaaf guddaa!
Abba firdii, bulchiinsa haqaa! Mootii guddaa uumaa hundaa!
Dhiigi cophee dhangala’uu,
Guyyaa malee xobbeen ilmaa gaafa du’u, iyyi hiyyeessaa himimmaansaa, akkamittiin si teessisaa, Wawwaatnaansaa!?
Mootii biyyaa situ kaasee situ ka’aa!
Kaasii nurraa mootii jallaa!
Nuuf moosisi maatii ballaa!
Si amannee yoona geenye mootii keenyaa!
Nurraa galchi saba yartuu
Ati homaa hin dadhabduu!
Reply	seenaa TemamApril 11, 2016 at 8:53 pmPermalink	Beekan Gulumma galatoomi sammuun kee yommiyyu kuusaa galmee yaadati kan waaqni ganamumma tolche kan quqqamninfi chunqursa saba kee xinxalamtedha hori buli